ဒီကလေးမလေးကို ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမိန်းကလေးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာလွန်လို့လား – Trend.com.mm
Posted on May 9, 2018 May 10, 2018 by Noel
ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးမိန်းကလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Thylane Blondeau ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကို မှတ်မိကြသေးရဲ့လား? ပြင်သစ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး သူမကို ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ဧပြီ ၅ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အမေကိုယ်တိုင်ကလည်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို သမီးဖြစ်သူ Thylane Blondeau ဟာလည်း ၄ နှစ်အရွယ်မှာ မော်ဒယ်လ်စလျှောက်နေပါပြီ။ သူမကိုမေ့နေလိုက်တာ အခုဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ၁၆နှစ်မလေးဖြစ်နေပါပြီ။
မမှတ်မိလောက်အောင်ပြောင်းလဲလှပလာပေမဲ့သူမရဲ့စူးရှတဲ့ခရစ်စတယ်မျက်ဝန်းပြာလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရဆဲပါ။ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ်ခြေချနေသူဖြစ်ပြီး သူမအမေရဲ့ ဆန္ဒအရ သရုပ်ဆောင်လောကဘက်ကိုပါ ကူးပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်တဲ့။
အခု အသက် ၁၆နှစ်မှာ L’Oreal Paris ရဲ့ မျက်နှာဖုံးမော်ဒယ်လ်ဖြစ်နေပြီး မဂ္ဂဇင်းတွေ ၊လျှောက်လမ်းတွေပေါ်မှာအချိန်တိုင်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူမရဲ့အမေကတော့ Veronica Loubry ပါ။အဖေဖြစ်သူက Patrick Blondeauဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်၊ အမေနဲ့အဖေ ဆီက လှပမှုတွေအကုန်သမီးဖြစ်သူက အမွေရထားပါတယ်။
အသက် ၄ နှစ်ကတည်း မော်ဒယ်လ်အဖြစ်စတင်ခဲ့တဲ့ Thylane Blondeau ဟာ အခုဆိုရင် အတော်လေးအောင်မြင်နေပါပြီ။အသက် ၁၀နှစ်တုန်းက ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်လိုဝတ်စားခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ နောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေတရစပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာလည်း 1.2 သန်းဖောလိုးဝါးရှိပြီး တွစ်စ်တာမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့ တွစ်စ်တာထက် အင်စတာဂရမ်ကိုသာ ပိုသုံးပါတယ်။ငယ်ငယ်ကတည်းက သူမကိုကမ္ဘာ့အလှဆုံးမိန်းကလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ မှတ်မိတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ။သူမ ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲလာပြီး လှပလာသလဲဆိုတာ ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကမ်ဘာပျေါမှာအလှဆုံးမိနျးကလေးသတျမှတျခံခဲ့ရတဲ့ Thylane Blondeau ဆိုတဲ့မိနျးကလေးကို မှတျမိကွသေးရဲ့လား? ပွငျသဈလူမြိုးဖွဈပွီး သူမကို ၂၀၀၁ခုနှဈ၊ဧပွီ ၅ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ အမကေိုယျတိုငျကလညျး ရုပျရှငျမငျးသမီးတဈလကျဖွဈသလို သမီးဖွဈသူ Thylane Blondeau ဟာလညျး ၄ နှဈအရှယျမှာ မျောဒယျလျစလြှောကျနပေါပွီ။ သူမကိုမနေ့လေိုကျတာ အခုဆိုရငျ ဆယျကြျောသကျအရှယျ ၁၆နှဈမလေးဖွဈနပေါပွီ။
မမှတျမိလောကျအောငျပွောငျးလဲလှပလာပမေဲ့သူမရဲ့စူးရှတဲ့ခရဈစတယျမကျြဝနျးပွာလေးတှကေိုမွငျတှနေ့ရေဆဲပါ။ဖကျရှငျမျောဒယျလျတဈယောကျအဖွဈခွခေနြသေူဖွဈပွီး သူမအမရေဲ့ ဆန်ဒအရ သရုပျဆောငျလောကဘကျကိုပါ ကူးပွောငျးဖို့အစီအစဉျရှိပါတယျတဲ့။
အခု အသကျ ၁၆နှဈမှာ L’Oreal Paris ရဲ့ မကျြနှာဖုံးမျောဒယျလျဖွဈနပွေီး မဂ်ဂဇငျးတှေ ၊လြှောကျလမျးတှပေျေါမှာအခြိနျတိုငျးမွငျတှနေ့ရေပါတယျ။သူမရဲ့အမကေတော့ Veronica Loubry ပါ။အဖဖွေဈသူက Patrick Blondeauဘောလုံးကစားသမားတဈယောကျ၊ အမနေဲ့အဖေ ဆီက လှပမှုတှအေကုနျသမီးဖွဈသူက အမှရေထားပါတယျ။
အသကျ ၄ နှဈကတညျး မျောဒယျလျအဖွဈစတငျခဲ့တဲ့ Thylane Blondeau ဟာ အခုဆိုရငျ အတျောလေးအောငျမွငျနပေါပွီ။အသကျ ၁ဝနှဈတုနျးက ပွငျသဈမဂ်ဂဇငျးတဈခုမှာ အရှယျရောကျသူတဈယောကျလိုဝတျစားခဲ့တာကွောငျ့ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့ပမေဲ့
အဲ့ဒါကွောငျ့ပဲ နောကျပိုငျးမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှတေရစပျရရှိခဲ့ပါတယျ။ အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာလညျး 1.2 သနျးဖောလိုးဝါးရှိပွီး တှဈဈတာမှာလညျး တှနေို့ငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့သူမကတော့ တှဈဈတာထကျ အငျစတာဂရမျကိုသာ ပိုသုံးပါတယျ။ငယျငယျကတညျးကသူမကိုကမ်ဘာ့အလှဆုံးမိနျးကလေးအဖွဈသတျမှတျထားလို့ မှတျမိတဲ့သူတှလေညျးရှိမှာပါ။သူမ ဘယျလောကျထိပွောငျးလဲလာပွီး လှပလာသလဲဆိုတာ ပုံလေးတှကွေညျ့လိုကျပါဦး။
ဇူလိုင်လဆို ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ” Mamma Mia! Here We Go Again”